Maintenance Manager | Pro Paragon Construction Co., Ltd ﻿
•	ကုမ္ပဏီ၏ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် Maintenance လုပ်ငန်းများကို Maintenance Team အားဦးစီး၍ စီမံခန့်ခွဲ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်
•	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသည့် Generator, Electrical and Mechanical Tools & Equipment များ၏ Operation,Maintenance and Repair လုပ်ငန်းများကို Site လိုအပ်ချက်နှင့် ညှိုနှိုင်းစီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်ရန်
•	Generator, Electrical and Mechanical Tools & Equipment များ ပျက်စီးမှု နည်းပါးစေရန်အတွက်၊ အသုံးပြုပုံကိုသင်ပြပေးခြင်း၊ အသုံးပြုသူများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ပုံမှန် Maintenance ပြုလုပ်ပေးခြင်းများကို စီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်ရန်
•	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသည့် Heavy Equipment (Excavator,Compator etc.)& Vehicle (Dump,Truck,Crane,Car etc.) များ၏ Operation, Maintenance and Repair လုပ်ငန်းများကို Site လိုအပ်ချက်နှင့် ညှိုနှိုင်းစီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်ရန်
•	Heavy Equipment (Excavator,Compator etc.)& Vehicle (Dump,Truck,Crane,Car etc.) များ၏ စစ်ဆေးခြင်း၊ ပုံမှန် Maintenance ပြုလုပ်ပေးခြင်းများကို စီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်ရန်
•	Site Operation ၏ Temporary work & Maintenance Team စီမံခန့်ခွဲရန်
•	AGTI/ B.Tech/ B.E (Mechanical/ Electrical) ဘွဲ့ရရှိသူ (သို့) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရပါမည်။
•	အသက် 35နှစ်နှင့် အထက်ဖြစ်ရပါမည်။
•	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး 10 နှစ် ရှိရပါမည်။ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အတွေ့အကြုံကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်။
•	Heavy Equipment & Vehicleစက်ယာဉ်ယန္တရားများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသည့် အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး 5နှစ် နှင့် အထက်ရှိရမည်။
•	Computer, Email,Excel တတ်ကျွမ်းရမည်။
•	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်သူ၊ ရိုးသားကြိုးစားသူ၊ စာရင်းများကိုတိကျစွာ စစ်ဆေးနိုင်သူ၊ ဦးဆောင်နိုင်သူ Maintenance လုပ်ငန်းများကို ဦးစီး၍လုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	Regular Site Inspection သွားနိုင်ရမည်။
•	သီလ၀ါ Base Camp တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
Job Function: Maintenance Manager
390 Days, Full time , Construction / Building
Maintenance Manager Maintainance jobs jobless Jobsinyangon Pro Paragon Construction Co.,Ltd Maintenance Jobs Maintenance Jobs Maintenance Manager Jobs in Myanmar, jobs in Yangon